Jwxo-shiil: Anigu ma Dilin Dr. Dolal, Saaxiibkay Buu Ahaa! – Rasaasa News
Jwxo-shiil: Anigu ma Dilin Dr. Dolal, Saaxiibkay Buu Ahaa!
Jun 27, 2010 Jwxo-shiil: Anigu ma Dilin Dr. Dolal, Saaxiibkaybuu ahaa
Yaa rumaysan maanta, “waa goorma, ma goor aan cagan ogaadeen galaybaa” Jwxo-shiil, oo ay cirka iyo dhulkuba ka soo xidhmeen, darxumo aad u weyna ay ka muuqato ayaa doraad lagu arkay Copenhagen, Denmark.
Waxaa Denmark ugu yeedhay isaga iyo afar dhalinyaro ah ninka uu adeerka u yahay ee uu ka dhigtay arimaha dibada Gacma Dheer. Dhalinyarada isu timid oo ahaa kuwii muusiga jeclaa ee iskuulada ku dhacay ayaa Denmark isugu tagay u jeedo la,aan.
Jwxo-shiil, cidii caqli lihi way dareemi in uu ka soo if baxay dhigii islaanka iyo N/hurayaashii uu gardarada ku dilay. Sababta uu u laayeyna waxay ahayd oo kaliya u jeedo lacageed.
Jwxo-shiil, oo uu dhibkiisu yahay lacag, ayaa jecel in uu taagnaado meel kasta oo ay ku kulmaan kuwa isga taageera. Denmark-na waxaa uu moodayey in uu Jaango iman oo meeshaas xoogaa goo,go ah laga heli doono, balse waa loo gooyey oo xiligan waa laga wareegsaday.
Waxaa la sheegay in dadka meesha isugu yimid ay tiro ahaan ahaayeen 20 ruux da,adooduna tahay 20 jiro, Jwxo-shiil kaliya ayaa meesha joogay wax ruux weyn ah.
Jwxo-shiil, ayey dadkii dhalinyarada ahaa ee goobta yimid ay aad ula yaabeen, waxa uu ka hadlay oo aan ahayn wax la sugayay xiligan isaga oo yidhi “Dr. Dolal anigu ma aanan dilin, saaxiibkay buu ahaa, waxa ay sheegayaan oo dhan waa hafaryo, KITAAB ayaan u marayaa”.
Daacad la,aanta Jwxo-shiil, dilkii Dr. Dolal waxaa laga joogaa mudo 18 bilood, waxaana meelo badan lagu waydiiyey waxa ka jira arimahan la sheegay, xitaa si guud Tv-ga Universal ayay xaaskii Dr. Dolal ugu waydiisay in uu ninkeedii dilay. Su,aashaas oo dadweynihii Somaliyeed ee TV fiirsanayey ay cilmi nafsi ah [psychologically] u qireen in lug weyn ku lahaa dilkii Docktorka, waayo wuuna is dhaga marsiiyey su,aasha gabadha. Maanta ka horna afkiisa lagama maqal isaga iyo inta la socota midna Dr. Dolal iyo waxqabadkiisii ku aadanaa halganka ay waday ONLF iyo waliba dilkiisii.
Jwxo-shiil, maanta kolkii ay ummada Somalida Ogadeeniya ogaatay ruuxa uu yahay, ee waliba uu siyaasadii kaga guulaystay Eng. Salaxudiin Cabdiraxman Xaaji Macow, in uu yidhaahdo eegga anigu Dr. Dolal ma dilin maxay tahay macanaheedu?
Waxaa dhab in ay ONLF heshiis qaadatay, oo wixii hada ka dambeeya uusan Jwxo-shiil, ku dhuuman karin magaceeda. Waxaana isku soo banaanaday Jwxo-shiil iyo dadkii uu dambiga ka galay oo ayna kola is gafaynin, waana arintaas sababta oo uu maanta Jwxo-shiil, u leeyhay anigu Dr. Dolal ma aanan dilin.
Ethiopia Says Peace Deal Agreed With Rebel
Yaa Nabada Doonaaya, Yaase Nabada Diidaaya?